Sheekh Dirir "Gumeystaha meeshuu Owr marinayo Irbad buu ku dayaa"! [Video].
Wednesday August 02, 2017 - 10:37:55 in Wararka by Super Admin
Sheekh Maxamed Dirir oo ka mid ah Culimada Soomaaliyeed ku nool magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay Kaniisadda maalma kahor laga furay magaaladaasi.
Sheekhu waxa uu tilmaamay inaysan Sharciyan bannaaneyn in dhulka Muslimiinta laga furo Kaniisado ay Nasaarado leeyihiin, isagoona sheegay in arrintaasi ay keeni karto in dadka Muslimiinta looga fitneeyo diintooda.
” Haddii dalku dal islaam yahay, kaniisad in laga dhiso lama ogola, haddii la dhisana waa la duminayaa, mid horey loo dhisayna in la dayactiro lama ogola, waa mas’alo fiqhi ah oo Culimadu isku waafaqsan yihiin” ayuu yiri Sheekh dirir.
Wuxuu tilmaamay in qolada Nasaarada ah ee Kaniisadda Hargeysa ka furay inay ka tirsan Xarunta Vatikaanka ee magaalada Roma, islamarkaana ujeedkoodu yahay in dhulka ay Soomaalidu dagto ka billaabaan ol-ole kirishtaameyn ah.
"Gumeystaha meeshuu Owr marinayo Irbad buu ku dayaa, haddii maanta loo ogolaaday inay Kaniisad furaan, marka xigtana waxay sameynayaan inay diintooda dadka ugu yeeraan, taasna waa arrin khatarteeda leh” ayuu yiri Sheekh Dirir.